Oogur: Vaka uye Teedzera Yako Google Analytics Campaign URLs | Martech Zone
Oogur: Vaka uye Teedzera Yako Google Analytics Campaign URLs
Chishanu, February 2, 2018 Chishanu, February 2, 2018 Douglas Karr
Vatengesi vanoita mishandirapamwe kuburikidza nemazana emigwagwa uye anenge munhu wese anoshandisa Google Analytics mazuva ano. Nepo mamwe masoftware sevapi vevashandi achisanganisa otomatiki mushandirapamwe URL yekutevera, yakawandisa ichiri kuisiya kumushambadzi kuti igare nehukama hwavo ne Google Analytics UTM parameter.
Kuvaka mushandirapamwe wako kwakakosha, kunyanya izvozvi Google payisingapi ruzivo rwakakosha pamusoro pevashandisi veGoogle avo vakapinda mune chero zvivakwa zvavo. Izvi zvinozivikanwa se rima traffic sezvo iwe usingakwanise kutaura kuti mushanyi asvika kupi kana sei. Kuti udzivise izvi, unofanirwa kukwidziridza paramita yeUTM uye kuvaka maGoogle Campaign ma URL. Kana iwe urikuita mushandirapamwe pane email, Facebook, Twitter, mafoni-kune-chiito, kushambadzira, uye zvimwe zviteshi… unofanirwa kuvaka imwe neimwe yako URL yemushandirapamwe pachiitiko chega chega. Izvo zvinoshungurudza uye zvinopedza nguva. Kusvikira zvino…
Oogur inovaka yako ese eGoogle Campaign ma URL mune imwechete, ine hushamwari interface. NaOogur, unogona:
Vakai - Shandisa iyo oogur URL inovaka kuvaka ma URL akaiswa neyakaenzana UTM parameter.
njanji - Teedzera ese ma paramita eUTM & ma URL akavakwa munzvimbo imwechete - kwete pepanheti.
ripoti - Wana nzwisiso huru mumushandirapamwe data muGoogle Analytics nekudzora huwandu hwerima traffic mumishumo.
Oogur inotora iwo chaiwo manyorerwo, akaomarara maitiro ekuvaka trackable zvinongedzo uye zvinoita kuti zvive zvakapusa. Semushambadzi wedigital, oogur inondibvumidza kusevha nguva yekuvaka mushandirapamwe URLs pahukuru hwehukuru, hwakakura. Mhedzisiro mhedzisiro ndeye yakarongeka uye inoshanda yekufambisa inoita kuti zvive nyore kuona kuti ndeupi mhando yezvinyorwa zviri kuita zvakanyanya. Ndingakurudzira zvikuru kupa oogur pfuti ”Derek McClain, Dhijitari Kushambadzira Manager Mutyairi Solutions
Mashandisiro Ekushandisa Oogur Kuvaka Akawanda ma URL akapihwa neUTM Parameter
Zvakanakira Oogur Sanganisira:
Sevha mizhinji yenguva nekuvaka nekutarisira ma URL uye maTM tag mune imwe chikuva pane vekunze vavaki, maspredishiti, uye URL mapfupi.
Vaka ma URL akawanda panguva imwe chete
Shandisazve ma tag eUTM awanga uchishandisa kurondedzerana kuGoogle Analytics
Oogur's web application ndeye mobile inoshamwaridzika, kusiyana nemaspredishiti
Google Analytics Campaign Reports inotanga kukupa iwe yekuwedzera, inonzwisisika inobatsira paunoshandisa matemu eUTM kuona yakatarwa yemushandirapamwe muma URLs - inoderedza huwandu hwe "rima traffic"
Oogur yakavakwa nevatengesi vevashambadzi - ichienderera mberi ichivandudza kugadzirisa izvo zvinodiwa nevatengesi
Uye, nekutsigira oogur, iwe unotsigira Mukadzi-Akazvimiririra Technology Bhizinesi. Oogur yakavambwa naNicki Laycoax, shamwari yenguva yakareba yangu.
Nevanhu vazhinji vari muchikwata chedu vachishandisa parameter jenareta, ipapo mupfupisi uye vamwe vachishandisa avo avo Chrome plugins zvakava zvakaoma kuteedzera yedu yese yekubatanidza yekuvaka chiitiko. Wobva wawedzera paspredishiti kuti uvaratidze vese, kunyangwe mukati mekubatana suite senge Office365 kana Google Docs, uye maitiro acho haana kunaka. Kushanda mukati meimwe puratifomu kune ese aya mabasa kwave kuri kubatsira kukuru. Chris Theisen, Kushambadzira Automation Manager, BlueSky Dhijitari
kushandisa Oogur, yako Google Analytics inoshuma inowirirana uye yakazara zvizere kune yakagadziriswa mhedzisiro:
Sign up pamberi paFebruary 28, 2018, tevera @oogurit uye tweet "SHAMWARI-YA-DKNEWMEDIA", uye iwe unozowana 10% kubva pahupenyu hwekunyorera kwako!
Saina Chikumbiro cheMahara Muedzo!
Kuzivisa: Derek naChris vakapihwa mahara kuwana kune oogur.com sechikamu cheboka revashandisi ve beta. Vashandisi vaviri ava vakabatsira kuyedza iko kunyorera uye nekupa mhinduro yakakosha yekubatsira timu nemazano ezvekuwedzera kuti iwedzere kuoogur kuti chikuva chive chinoshanda chevashambadzi. Derek naChris havana kubhadhariswa rezinesi ravo mukutsinhana mhinduro yavo yakatendeseka yekugovana nevatengi vanogona senge iwe.
Tags: mushanduri anovakarima trafficgoogle analyticsgoogle mushandirapamwe url anovakaoogurparamita utm
Iyo Shanduko yeKutsvaga Injini Kugonesa: Ine Mamwe Mahara SEO Mazano
PacketZoom's Mobile Expresslane CDN Yakabatana neAmazon Cloudfront
Nicki Kudzai (@NickiKudzai)
Kukadzi 3, 2018 na5: 14 PM
Kutenda nekugovana, Doug!